Kuuriyada Woqooyi: Cunaqabateyn waxba nagagama qaadeysaan | Berberanews.com
Home WARARKA Kuuriyada Woqooyi: Cunaqabateyn waxba nagagama qaadeysaan
Kuuriyada Woqooyi: Cunaqabateyn waxba nagagama qaadeysaan
Wuxuu tallaabadaas ku tilmaamay “arrinta ugu xun oo anshaxdaro ah, xadg udubna ku ah aadanaha oo ah ficil cadowtinimo”.
Tijaabadaas ka dib Qaramada Midoobey ayaa cunna qabayn dheeraad ah saartay Pyongyang, waxaana loo cambaareeyay si loo dhan yahay. Waxaa lagu tilmaamay “daandaansi”.
Warka qoraalka ah ee ka soo baxay xafiiska wasaaradda arimaha dibadda ee Kuuriyada Woqooyi waxaa lagu sheegay: “Sare u kaca dhaqdhaqaaqa Mareykanka ee gobolka iyo cunna qabataynta iyo cadaadiska naga dhanka ah wuxuu xoojinayaa xawaaraha uu ku socdo qorsheheena ah in ugu dambeyn aan helno nukliyer.”
Talaabooyinka ayaa waxa ay ka dambeeyeen kadib tijaabii lixaad, uguna xoogga badnayd oo ay samaysay Kuuriyada Waqooyi . Hase yeeshee dadka wax naqdiya ayaa su’aalo ka keenay illaa heerka ay xanuunjin karaan Kuuriyada Waqooyi xili dalkan uu si furfuran ula ganacsanayo adduunka intiisa kale.
Previous articleSomaliland: 13 November Doorasho ama Dooriso – Qalinka Muuse Jaambiir